Shiinaha Impact Drill 13MM BID1303 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Qalabka Benyu
Culummo culus oo dubbe wareegaya ...
Xadgudubka Xannibaadda Xir ...
Cordless dubbe Drill Dc100 ...
Danab / inta jeer: 220 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
Awood la qiimeeyay: 600W
Xawaare-xamuul la'aan: 0-2600 / daqiiqo
Heerka saamaynta: 0-42000 / daqiiqo
Dhexroor qodista ugu badan: 13MM
Awoodda soo dejinta: 1.5-13MM
Cabbirka mashiinka: 270 × 63 × 210mm
Miisaanka mashiinka: 1.65Kg
Dalool ayaa laga yaabaa in loo baahdo in lagu qoro dhagax, sibidh, leben ama dusha sare, iyo, si hawshaas loo dhammeeyo, daloolinta waxyeellada ayaa badanaa loo baahan yahay. Layli saameyn ayaa isku daraysa shaqooyinka dubbe koronto iyo daloolin si loo jajabiyo loona jajabiyo walxaha cufan
dalool dusha ka samee.
Tababbarka saamaynta Benyu waxaa loo dhisay qandaraaslaha xirfadlaha ah. Waxay ku habboon tahay howlaha gacanta ku haysa, qaar ka mid ah xulashooyinka dheeriga ah ee laylisyada wax ku oolka ah waxaa ka mid ah xawaareyaasha isbeddelaya iyo leyliska dib loo rogi karo.
Mashiinkeeda xoogga leh wuxuu bixiyaa culeys sarreeya, xakamaynta xawaaraha isbeddelka ayaa bixisa qodis sax ah, beddelka beddelka ayaa ku habboon dhajinta iyo goynta goynta, culeyska culus ee culus ee xoog qabashada iyo yaraynta siibashada.
Qaab dhismeedka Compactmachine, jidh fudud oo la qaadi karo, oo si fudud looga hawlgeli karo meelaha cidhiidhiga ah.
Saddex-daan xoog leh oo chuck ah ayaa hubiya isku-habeyn xasiloon.
Laba nooc oo daloolin iyo daloolin durbaan ah, oo ku habboon isticmaalka badan.
Gacanta oo leh nashqad caag ah, raaxo leh, naxdin leh, kana hortageysa sibiibix ah.
Qalabka korantada elektaroonigga ah beddelaadda xakamaynta xawaaraha, xakamaynta xawaaraha fudud.
Haysashada burushka kaarboon wareegaya wuxuu hubiyaa wax soo saar koronto isku mid ah marka uu gadaal ka noqdo
Qiyaasta qoto dheer ee saxda ah, waxay si sax ah u xakameysaa qoto dheerida qodista, samaynta hawlgal sax ah.
Naqshadeynta qaboojinta hawo fiican, waxay si wax ku ool ah u dheereysaa nolosha mootada.
360 ° gacan qabad, si dabacsan ula jaan qaada baahiyaha kala duwan.
Hore: Bacda Furimaha Xagasha 1008xz / 180 230
Xiga: Saamaynta Daloolida 13MM BID6182
Qodista Iyo Saamaynta Darawalka
Qodista Iyo Saameynta Sahaminta
Waxoogaa Daloolin Darawal Darawal
Culus dubbe Rotary dubbe 38mm BRH 3805
Burburinta Hammer Bdh1600x01
Dubbe Drill 24MM BHD 2413
Burburinta Hammer Bdh 6504